चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउने यी ५ खानेकुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउने यी ५ खानेकुराहरु !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : ११ कार्तिक २०७८ ०७:२६
चिसो मौसम सुरु हुने बित्तिकै मानिसहरुको जीवनशैली पूर्ण रुपमा परिवर्तन हुने गर्छ । कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट शरीरलाई बचाउनका लागि मानिसहरु ऊनीको कपडाको सहारा लिन्छन् । तरपनि चिसोबाट जतिसुकै बच्छु भन्दा पनि छोइहाल्छ । यस्तोमा चिसो मौसममा पाइने केही विशेष खानेकुराले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट हामीलाई जोगाउने गर्छ । यस्ता खानेकुराले तपाईंको शरीरलाई तातो त राख्छ नै यसले स्वास्थ्यका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यी सुपरफूड खाँदा चिसो मौसममा बिरामी पर्ने सम्भावना निकै कम रहन्छ ।शख्खरखण्डः
चिसो मौसममा कोदोले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठूलो फाइदा पुर्याउँछ । यदि तपाईं भिगन डाइटमा हुनुहुन्छ भने शरीरको क्याल्सियम पूर्तिका लागि रागी छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाहेक कोदोले मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै रक्तअल्पत्तामा पनि राहत प्रदान गर्छ । यसले निद्रा नलाग्ने, तनाव र डिप्रेसनमा पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । रातोपाटी बाट सभार